Firefox inoda kuve default browser paIOS ine yayo yazvino kugadzirisa | IPhone nhau
Firefox inoda kuve default browser paIOS ine yayo yazvino kugadzirisa
Apple yakagara ichizivikanwa nekusabvumidza yechitatu-bato kunyorera inogona kugadzirisa echisikigo kurongeka kweiyo iOS inoshanda sisitimu. Asi zvinoita sekunge izvi zviri kuchinja zvishoma nezvishoma. Firefox, seAptlook, Airmail, Mail.Ru, maMail uye Spark application zvakagadziridzwa zvichitibvumidza kuvhura mawebhu link kubva kune ava vatengi kuburikidza neFirefox. Panyaya yeFirefox, sezvo isiri email mutengi, iyo yazvino yekuvandudza inobvumidza iwe kushandisa chero eaya maapplication kutumira maemail zvakananga kubva kune peji rewebhu. Kutanga kwekuguma kwekushandisa kweMeyili kunotanga.
Nokusingaperi, zvishandiso zvinoramba zvichishandisa Safari neMail kuvhura zvinongedzo kana kutumira maemail, saka isu tinofanirwa kuisa zvigadziriso kuti tishandure mutengi wetsamba, mune iyo Firefox kana bhurawuza mune yekushandisa tsamba. Mumufananidzo uri pamusoro tinogona kuona kuti Spark mail mutengi anotibvumidza isu kusarudza seasipo mabhurawuza pakati peSafari, Firefox, Chrome kana yekushandisa pachayo.
Nenzira iyi, Firefox inoda kuwedzera kuvepo kwayo mumusika wefoni, uko parizvino isiri pakati pekutanga sarudzo dzevashandisi, zvese muIOS uko Safari iri mambo uye muApple senge Chrome haina kana muvengi.
Maitiro ekutumira maemail kubva kuFirefox nevatatu ema-email vatengi
Kuti tigadzirise Firefox uye kubva ikozvino kuvhura yedu default mail mutengi, mune yangu Spark, isu tinofanirwa kuenda ku Zvirongwa uye mukati meGeneral chikamu, tinya muna Kubvumbi na.
Rondedzero yezvishandiso zvinoenderana neiri mail basa zvinoratidzwa pazasi, senge: Outlook, Airmail, Mail.Ru, myMail uye Spark. Izvo zvisina kuiswa pane yedu kifaa zvinoratidzwa mune yakajeka grey, nepo izvo izvo zvakaiswa zvinoratidzwa mune nhema.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Firefox inoda kuve default browser paIOS ine yayo yazvino kugadzirisa
Yangu iPhone inoratidza iwo meseji "Isiriyo SIM" Ndinozvigadzirisa sei?
AT & T "inouraya" iyo yekutanga iPhone (2007) pane yayo nhare mbozha